निर्मलाका साथीहरुको प्रधानमन्त्री ओलीलाई भावविह्वल पत्रः हत्यारा कहिले पक्राउ पर्छन् ?
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमत्तदनगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पाँच हप्ता नाघेको छ । गत साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी पन्तका सहपाठीहरुले साथीको हत्यामा संलग्न पक्राउ नपरेकोबारे प्रधानमन्त्रीलार्इ चिठ्ठी लेखेका छन् ।
शुक्रबार उनीहरुले हाम्री साथी निर्मलाका हत्यारालाई कहिले कार्वाही हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् । निर्मलाका साथीहरु जानकी भट्ट, गीता जोशी, लक्ष्मी बडु र पूजा चन्द्राले पत्र लेखेर प्रधानमन्त्रीलाई हत्यारालाई कार्वाही गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले निर्मलाका दोषीहरुलाई एक महिना भन्दा बढी समय हुँदा समेत पक्राउ पर्न नसकेकोमा दुखेसो गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका छन्, ‘हाम्रा साथीका हत्यारालाई कहिले कार्वाही हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’
निर्मलाका साथीहरुले हत्यारालाई कार्वाही गरि निर्मलालाई न्याय दिलाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले निर्मलाले मरेकै ठाउँमा पन न्याय पाओस भन्ने चाहना राखेका छन् ।
बलात्कारी र हत्यारालाई अहिलेसम्म कार्वाही भएको छैन । निर्मलाका हत्यारालाई कार्वाही गर्न माग गर्दै कञ्चनपुरमा आन्दोलन चर्कियो । एक जनाको मृत्यु भयो । एक जना अझै बेहोस् छन् । दर्जनौं घाइते भएका छन् ।
निर्मला काण्डकै कारण राजनीतिक उथलपुथल भयो । सरकारले विपक्षी दललाई अनावश्यक आन्दोलन चर्काएको आरोप लगायो भने विपक्षीले सर्वसाधारणलाई शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको आरोप लगायो ।
हुन पनि अहिले बालिकाहरु मात्र होइन महिलामाथि नै सुरक्षा खतरा छ । साउन १० गते निर्मला बलात्कृत भइन् । सोही दिन उनको हत्या पनि भयो । त्यसपछि दर्जनौं बालिका, महिलाहरु बलात्कृत भइसकेका छन् ।
सुरक्षा दिन सरकार चुकेको छ । बलात्कारीलाई कार्वाही गर्न सरकार चुकेको छ ।
एजेन्सी । बलिउड स्टार सधै आफ्ना विलासी जीवनशैली र आफ्ना सुन्दर लुक्सका कारण चिनिएका छन् । जसको बारेमा धेरै कुरा जान्न फ्यानहरु सधै उत्सुक रहने गर्छन् ।